Fo-ti - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Fo-ti
Fo-ti ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Fo-ti ကို တရုတ်ပြည်မှာ သူ့ရဲ့ နုပျိုစေပြီး အသားအရည်ကြည်လင်စေတဲ့ အစွမ်းအတွက် အသုံးပြုပြီး အသည်း၊ ကျောက်ကပ် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ တိုးတက်ဖို့နဲ့ သွေးကို သန့်စင်စေဖို့ အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ သူ့ကို အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အရိုးအားနည်းခြင်း၊ ဝမ်းချုပ်ခြင်းနဲ့ သွေးခဲခြင်းတွေ အတွက်လည်း အသုံးပြုပါတယ်။ သူဟာ ကိုယ်ဝန် ရရှိနှုန်းကို မြင့်တက်စေပြီး သွေးသကြားဓါတ် ပမာဏနဲ့ ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သူ့မှာ ရောဂါပိုးတွေ သေစေနိုင်တဲ့ အစွမ်းလည်း ရှိပါတယ်။
Fo-ti က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ
Fo-ti ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ လုံလောက်တဲ့ လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ ပိုမို သိလိုတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရှိရင် Herbal ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Fo-ti ရဲ့ အချက်အလက်တွေကတော့ ပျောက်ဆုံးနေတုံးပါပဲ။ ရရှိနိုင်တဲ့ အချက်အလက် အများစုဟာလည်း ၁၉၉၀ ကျော်တုံးက တရုတ်စာပေတွေမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
Fo-ti ကအသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Fo-ti ကို အေးမြပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ နေရာတွေမှာ ထားသင့်ပြီး အပူနဲ့ ရေငွေ့ရိုက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
Fo-ti ကို မဝယ်ခင်မှာ အရောင်ရင့်တဲ့ အမြစ်တွေဟာ ပိုအစွမ်းထက်ပြီး အဖြူရောင် အမြစ်တွေကတော့ အရည်အသွေးမကောင်းတတ်ပါဘူး။
ဒီအပင်ကို အကြာကြီး သုံးခြင်းဟာ ဝမ်းပျော့ဆေးကို မှီခိုရနိုင်ပါတယ်။
Fo-ti က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
Fo-ti ကို ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်နဲ့ နို့တိုက်နေစဉ်မှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ သူ့ကို ကလေးတွေကို မပေးသင့်ပါဘူး။ သင် ဝမ်းလျှောနေရင် (သို့) ဒီအပင်နဲ့ မတည့်ရင်လည်း အသုံးမပြုနိုင်ပါဘူး။
Fo-ti ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
Fo-ti ကနေ အောက်ပါဆိုးကျိုးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ပျို့အန်ခြင်း၊ အစာမစားချင်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း၊ အချိန်အကြာကြီး သုံးစွဲရင် ဝမ်းပျော့ဆေး မှီခိုရခြင်း
Fo-ti ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
Fo-ti ဟာ သင်အခုသောက်နေတဲ့ ဆေးတွေ (သို့) ရောဂါအခြေအနေတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးမပြုခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
ဆီးချိုဆေးများ – Fo-ti ဟာ ဆီးချိုဆေးတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
ဆီးဆေး – Fo-ti ဟာ potassim ထွက်သွားစေတဲ့ ဆီးဆေးတွေနဲ့ တွဲသုံးရင် သွေးအတွင်း potassium ကို နည်းစေနိုင်ပါတယ်။
Fo-ti အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ယခုဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေဟာ ဆေးပညာရပ်ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များနေရာမှာ အစားထိုးရန်မဟုတ်ပါ။ ဆေးမသောက်သုံးခင်မှာ ဆရာဝန်နှင့်ဖြစ်စေ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူနှင့်ဖြစ်စေ အမြဲ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Fo-ti ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
Fo-ti ကို အပင်စိမ်းအနေနဲ့ တစ်နေ့ကို 9-15g အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ပမာဏကို ထောက်ပံ့မယ့် လေ့လာမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။
Fo-ti ကို အသုံးပြုရမယ့် အချိုးအစားက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူနိုင်ပါဘူး။ အသက်အရွယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ အခြားအချက်အလက်တွေပေါ်မူတည်ပါတယ်။ Herbal supplements တွေဟာ အမြဲလုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိပါဘူး။ သင့်လျော်တဲ့ အချိုးအစားကို သိရှိနိုင်ဖို့ ကျွမ်းကျင်သူ (သို့) ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Fo-ti ကို အမြစ်ကို လှီးထားတဲ့ပုံစံ (သို့) အခြားအပင်တွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ပုံစံတွေနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Fo-ti. http://www.drugs.com/npp/fo-ti.html. Assessed August 7, 2016.
Fo-ti. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 768-fo-ti.aspx?activeingredientid=768&activeingredientname=fo-ti. Assessed August 7, 2016.Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version.
Fo-ti. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono- 768-fo-ti.aspx?activeingredientid=768&activeingredientname=fo-ti. Assessed August 7, 2016.
Bone bruise (အရိုးတွင် ဒဏ်ရာရခြင်း )